Saraakiil ka mid ah Booliska Hirshabelle oo qaatay tababar la xiriiray sharciyda | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Saraakiil ka mid ah Booliska Hirshabelle oo qaatay tababar la xiriiray sharciyda
Saraakiil ka mid ah Booliska Hirshabelle oo qaatay tababar la xiriiray sharciyda
Konton iyo lix sarkaal oo ka tirsan Booliska Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa qaatay tababar socday muddo shan maalmood ah,kaas oo ku saabsanaa ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta,gaar ahaan xilliyada Doorashada.
Saraakiishaan oo sidoo kale qaatay daruus la xiriirtay maareynta nidaamka dadweynaha,waxa laga soo kala xulay saldhigyada kala duwan ee Boliiska magaalada Jowhar, waxaana ciidamadaasi ku jiray 15 sarkaal oo haween ah.
Tababarkaan oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo qeybta Booliska ee Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), ayaa diiradda lagu saaray xakameynta dadka, maareynta rabshadaha iyo bannaanbaxyada.
AMISOM ayaa waxaa Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ay ka taageeraan dhanka tababarka iyo la talinta si ciidamada ay u helaan awoodda ay ku maareeyaan sharciga iyo kala dambeynta.
Previous articleWafdi ka socda Xukuumadda Soomaaliya oo ka qeyb galay Shirka Axdiga Carruurta Afrika
Next articleTababaraha Juventus oo Ka hadlay tagitaanka Ronaldo